खै त **, उत्तर राख्ने टाइम पाइनस्? ब्लग स्लग बन्द गरेर आफ्नी आमाको फरिया मुनि घुसिस् कि क्या हो? बढो अरुलाई ब्लग कसरी चलाउने भनेर सिकाउन खोज्थिस् त। हेहेहे
खै त **, उत्तर राख्ने टाइम पाइनस्? ब्लग स्लग बन्द ...
कस्तो लामो र फोहोरी शिर्षक भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ होला। म पनि त्यस्तै सोच्दैछु। दौंतरीमा आबद्द भए देखी थरी थरीका इमेल र कमेन्ट आइराखेका छन। ब्लग लेखेको मा ज्यानकै धम्की देखी आन्द्रै उल्टने गरेर गाली पनि दौंतरी इमेलमा प्राप्त भइरहन्छन। माथीको शिर्षक हालै गाउं खाने कथामा आएको निम्न स्तरीय कमेन्ट हो र यसले ले दौंतरीमा केही गनथन गर्न मन लाग्यो।
उस्तै भाषामा केही समय पहिला पनि कमेन्ट आएको थियो। यो कमेन्ट हेर्दा उही मान्छेले गरेको जस्तो लाग्छ। नेपालमा इन्टरनेटको पउंच निकै कम मान्छेको छ। अधिकांश मानिस अशिक्षाको छायांमा परेका युनीकोड चलाएर नेपाली भाषामा कम्पियुटरमा लेख्ने झनै कमै छन। यि समूहबिच पनि ब्लगको ज्ञान राख्ने नगन्यनै होलान। यही शिक्षीत समूहमा पर्ने एक महानुभाबले आफ्नो दरिद्रता झल्काउंदै दौंतरीमा तुच्छ कमेन्ट गर्न पूग्नुभयो। यो कमेन्टले हामि बिचको बोद्दीक दरिद्रता दर्साउंछ। सुकीला मुकीला कपडा लगाएर हात मिलाउंदै आफूलाइ शिक्षीत बर्गमा राख्ने तपाई हामी बिच पनि यस्ता दरिद्री पक्कै छेउ छाउमै होलान।
दौंतरी एउटा पब्लिक साइट हो। यस्मा हेरक उमेर,समूहका पाठकहरु हुनुहुन्छ। यस्तो पब्लिक ठाउंमा यिनै शिक्षीत हुल्याले मन परी बोल्दैछन। हुन त नेपालमा हरेक तहमा बल मिचाई देख्ने पहिन्छ। आफूलाई ठुलो देखाउन अरुलाई हेप्नू या तल खसाल्नू कुनै नौलो कुरा होइन। यस्तो ब्यबहार नेपालमा प्रशस्त देखिए पनि बिदेशमा पनि बिध्यमान छन। अरुको हुर्मत लिने यो शैलीलाई बिदेश तिर bully भनिन्छ। बुल्ली प्रमाणित भएको खण्डमा जेलै सजाय हुन सक्छ।
दौंतरीमा निम्न स्तरमा झरेर नाम लुकाई गाली गार्ने यि मानुभावलाई blog bullying भन्न चाहान्छु। नेपालको साइबर ऐनलाई लागू गर्दै हिजो मात्रै पूल्लचोक क्यामपसका देस्रो बर्षमा अध्यनरत एक बिध्धार्थीलाई आफ्नै सहपाठीको फोटोलाई बंग्याएर फेसबुकमा राखेको अपराधमा थूनामा राखिएको छ। काठमाण्डौको एक साइबर क्याफेबाट लुकेर साइबर क्राइम गरेका ति बिध्धार्थीलाई आइपीको आधारमा नेपाल प्रहरीले समातेको थियो। त्यसैले दौंतरीमा आएर blog bully गर्ने यि नकाबधारीको नाम र ठाउं पत्ता लगाउन असम्भव छैन।
उनलाइ कानुनको ब्याख्या गर्न भन्दा पनि एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहान्छु। क्रिपया तपाई घर गएर आफ्नो आमालाई भन्नूहोला,"आमा मैले एउटा पब्लिगक ब्लगमा गएर एक जना ब्लगरलाई झोकमा यस्तो भने"। तपाईको आमाको प्रतीक्रिया के पाउनूहुन्छ? नामै लुकाएर या छद्ममा नाममा दौंतरीमा यहि ब्लग अन्तर्गत तपाईको आमाको प्रतीक्रिया केमेन्ट बक्समा राख्नुहोला।
यस्ता प्रतीक्रिया ब्लगमा आइराख्छन। आफ्नो भावना पोख्न ब्लगमा भावना पोख्ने सबै ब्लगरलाइ यस्ता ब्लग बुल्लीबाट कती पनि कूण्ठित नहुन अनुरोध गर्दछु।
त्यो चेतनाबाट कुपोषित मनुष्यले चाँडै ज्ञान पाओस्, शुभकामना !
इन्टरनेट चलाउने सानो र सभ्य मानिएको जमात मा यस्ता तुच्छ कुरा गर्ने मान्छेहरुको कमि छैन !
"If you do not have foe, you have done nothing"
I would say: Good Job Dautari, it proves that someone out there envy you.
दौँतरीमा कमेन्ट लेख्न अल्छी गरे पनि यसका प्राय: सबै पोस्टहरू पढ्ने नै गरेको छु । यो कमेन्टको बारेमा त भने खै भन्नु र ? । म त ती मानसिक रोगीको रोग छिट्टै निको होस् भन्ने कामना मात्रै गर्न सक्छु ।
i agree with Dilip ji
what to say !
A perfect sampling of Nepali educative society. It happens everywhere.
अचम्मैको गाँठे मान्छे हरु कती सम्मा छाडा हुन सकेका हुन । चित्त नबुझेको कुरा राम्रै भाषा मा भनेको भएनी त हुन्थ्योहोला नि तर किन यती धेरै रिस पुखेका हुन कुन्नी ।
सङ्लो बहावमा यस्ता छेस्काहरू पनि देखा पर्छन् कुनै बेला । कुण्ठा पोख्‍ने यस्ता मनोरोगीको उपचार सहज रूपमा सामना गरेबाटै सम्भव होला ।
Basant Giri said...
अरुलाई बिनाकारण गाली नगरी खाको नपच्ने मान्छे छन् नी हाम्रो समाजमा। यो कमेन्टले त्यसैको प्रतिनिधित्व गर्छ।
July 29, 2011 at 4:52 PM
Guru.jati buddi chha, tesai anusar bhevahar garchan. kina mind garnu bhako?
नराम्रा इमेलहरु आइराख्थे। यस्तै खाले नराम्रा इमेल त बिशेषगरी बिहान आउने गर्छन। कती दिन बिहान बिहानै यस्ता फोहोरी इमेल हेर्न भनेर सबै सामू राखेको।
आशा गरौ सबैको सुझाबबाट ती महानूभावले अब यस्ता खाले कमेन्ट राख्नेछैनन। गलत कूरा कन्फेसन गर्ने जिम्मा तिनै पाठकको जिम्मा रहला।
yastai ho sir, manche deuta hune rahar ma dhungo hune manche, dhanna bully matrai bhayo, nakachara ko kunai okhati hunna bhanchan... yasta dhurt haru le ke confess garlan... malai ta ratti bhar yakin chaina... taipani herau k garda raichan .
दरिद्र मानसिकता बोकेका एकाध बुद्धिमान मुर्खहरु
आफू नागिएर अरुलाई नाग्गो देख्छन । सद्बुद्धी आओस
July 31, 2011 at 11:46 AM
मैले नियमित पढ्ने बल्गहो हो। कमेन्ट र आफ्ना प्रतिकृया चाहीँ नदिएको धेरै भयो। म यहाँ फेरि फर्किएर आए।
जस्ले कमेन्ट गरेका हुन उनलाई get well soon भन्दा बढी केही भन्न चाहन्न। कमेन्ट सधै राम्रा मात्र हुन्छन् भन्ने हैन। कहिले काहीँ नमिठा पनि हुन्छन् तर यो चाहीँ अलिक बढी भो...